Ungenza kanjani ukuthi ushintsho lusuke ku-MS Office luye ku-LibreOffice lula | Kusuka kuLinux
U-Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | I-GNU / Linux, Kunconyiwe
Ihhovisi suite liyithuluzi eliyisisekelo kunoma iyiphi inqubo yokufudukela kolunye uhlelo lokusebenza, hhayi kuphela emsebenzini kepha nakubasebenzisi basekhaya. Lokhu akuyona imfihlakalo, umbuzo ovame ukuzwakala lapho uphakamisa komunye umuntu ukuthi kungenzeka ukuthi ushintshele ku-GNU / Linux uthi: "Ngizokwazi yini ukuvula lelo fayela le-MS Office?" Ngokuqondile ngalesi sizathu, ukubaluleka okuncane esikunikeza ihhovisi lehhovisi ku-GNU / Linux kugcina kunginaka. Ngamanye amagama, ngikholelwa ukuthi ukuze i-GNU / Linux isetshenziswe kabanzi futhi inqobe imakethe yekhompyutha yedeskithophu unomphela, asikho isidingo somhleli wevidiyo othuthuke kakhulu noma isihleli sesithombe esisesikhathini ngempela. ye-Photoshop, hhayi ngisho ne-rig yokudlala njenge-Steam. Konke okudingekayo ukwenza ushintsho lube lula.
Ukufakwa kwefektri ye-GNU / Linux kumakhompyutha amaningi kuyisinyathelo esiqonde ngqo, kepha kungaba lusizo luni uma, ngokwesibonelo, ihhovisi suite lingakuvumeli ukuthi uvule amafayela abantu abasebenza kuwo? Ngalesi sizathu, enye yezinto engizincomayo kubantu abafuna ukuzama i-GNU / Linux ukuqala ukuzama izinhlelo zamahhala zesoftware ezisebenza nakwiWindows. Ngaleyo ndlela, ushintsho lubushelelezi. Ngakho-ke, ngokwesibonelo, ngifaka iLibreOffice, i-VLC, i-GIMP neFirefox, phakathi kwabanye, ukuze bajwayele isikhombimsebenzisi sayo nokusebenza okujwayelekile.
Icala elithile leLibreOffice, njengoba sengishilo, libaluleke kakhulu futhi alinazinkinga. Lo mhlahlandlela omncane uhlose ukusiza labo asebezozama leli hhovisi ukuze bakwazi ukuthatha isinqumo esinolwazi, nokuthi bazi izinzuzo nobubi bokusebenzisa lolu hlelo.
1 Kungani ushintshela kuLibreOffice?
2 Iziphi izinkinga engingabhekana nazo uma nginquma ukufuduka?
2.1 Ukusekelwa kwefayela akuphelele
2.2 Ama-Macros awasebenzi
2.3 Ayikwazi ukuhlela amadokhumenti ngokuhlanganyela
2.4 Ukuntuleka kokusebenza noma amaphutha (izimbungulu)
3 Eminye imibuzo
3.1 Funda ukufana
3.2 Iphrothokholi yokuthuthela eLibreOffice
3.3 Faka Amafonti e-Microsoft
Kungani ushintshela kuLibreOffice?
Kumahhala. Ngokungafani ne-MS Office, asikho isidingo sokukhokha izizumbulu zemali ukuze ukwazi ukuyisebenzisa. Yize lokhu kukodwa kungaba yisizathu esiphoqayo somsebenzisi ngamunye, kunomthelela omkhulu kakhulu kumabhizinisi amancane naphakathi, avame ukusebenzisa ikhophi elilodwa le-software yasehhovisi kwikhompyutha ngayinye yebhizinisi. Abantu abaningi, ngisho nezinkampani ezithile noma uMbuso uqobo, bancamela ukugwema le nkinga ngokusebenzisa amakhophi e-MS Office aphuciwe, okubeka engcupheni yokuphepha okusho lokhu. I-LibreOffice, ngakolunye uhlangothi, iyindlela yamahhala futhi evikelekile.
Kuyisoftware yamahhala. Njengayo yonke isoftware yamahhala, iLibreOffice ithola ukuthuthuka okuqhubekayo, okunomthelela ngqo kwezokuphepha nokuqina kohlelo. Ngaphezu kwalokho, iLibreOffice inomunye wemiphakathi osebenza kakhulu, osebenza njalo ekufakweni kokusebenza okusha nokulungiswa kwamaphutha.
Sebenzisa amafomethi wamahhala: Ngokungafani ne-DOC, i-WPD, i-XLS noma i-RTF, okuyifomethi evaliwe eyaziwa kuphela ngabadali bayo abazi kahle, iLibreOffice isebenzisa Ifomethi yamahhala ye-ODF, okwaba yi- I-ISO ejwayelekile yamazwe ngamazwe i-ISO 26300: 2006. Iqiniso lokusebenzisa ifomethi evulekile nejwayelekile livikela ukuphelelwa yisikhathi kwemibhalo yakho futhi likuvumela ukuthi livulwe ngokuzayo.
Kuyinto yesikhulumi esiningi: Kukhona izinhlobo zeLibreOffice zeWindows, Mac neLinux. Lokhu kwenza ushintsho lube lula, ikakhulukazi uma ungasebenzisi uhlelo olufanayo lokusebenza ekhaya nasemsebenzini, isibonelo.
Awusithandi isikhombimsebenzisi sebhebhoni se-MS Office. Abasebenzisi abaningi bakhetha ukushiya i-MS Office ngoba abakwazanga ukuzivumelanisa ne-interface ye-ribbon. I-LibreOffice, ngakolunye uhlangothi, ine-interface "yakudala", esiza ushintsho kulabo abasetshenziselwa i-interface yakudala ye-MS Office.
Iziphi izinkinga engingabhekana nazo uma nginquma ukufuduka?
Sivele sabona izizathu zokudlula. Kodwa-ke, njenganoma iyiphi inqubo yokufuduka, izinkinga zingavela. Ake sibheke okunye okuvame kakhulu:
Ukusekelwa kwefayela akuphelele
ILibreOffice neMS Office abayisebenzisi ifomethi efanayo yamafayela abo ngokuzenzakalela. Njengoba sibonile, iLibreOffice isebenzisa i-ODF. Ngokwengxenye yabo, izinhlobo ezindala ze-MS Office zisebenzisa ifomethi evaliwe (i-DOC, i-XLS, njll.) Eyaziwa yiMicrosoft kuphela ngokujula. Kusukela ngo-2007, i-MS Office isebenzisa i-OpenXML ngokuzenzakalela, eyaziwa nangokuthi I-OOXML (DOCX, XLSX, njll.). Ngokungafani nefomethi yangaphambilini, lokhu kungathathwa njengefomethi evulekile (njenge-ODF) futhi ikwazile ukuba yizinga lomhlaba jikelele I-ISO / i-IEC 29500.
Yize izinhlobo zakamuva zeLibreOffice neMS Office ziletha ukuhambisana kwawo wonke la mafomethi - nezinye eziningi - iqiniso ukuthi awaphelele, okuvame ukuthi amafayili awabukeki efanayo kuhlelo olulodwa nakwenye. Lokhu kunjalo, kubucayi kakhulu esimweni seLibreOffice, ngoba ayisetshenziswa kangako kune-MS Office. Ngalesi sizathu, ngabasebenzisi beLibreOffice okuzofanele bazivumelanise namafomethi abalulekile, uma lokhu kungagwemeka, kunjalo.
Ungayinciphisa kanjani le nkinga?
Yebo, into ebalulekile lapha ukuthola ukuthi ngabe amafayela okukhulunywa ngawo kufanele ahlelwe kamuva noma cha.
Uma kwenzeka ukuhlela kungadingeki, isixazululo silula kakhulu. Kungcono ukuthumela umbhalo ku-PDF bese wabelana ngaleli fayela esikhundleni soqobo. Lokhu kuyiqiniso kumafayili e-MS Office (i-DOC, i-DOCX, i-XLS, i-XLSX, njll.) Kanye namafayela e-LibreOffice (ODF), ngoba yize kuyiqiniso ukuthi ukuxhaswa okufakwa yiLibreOffice kwemibhalo ye-MS Office akuphelele, izinhlobo ezintsha ye-MS Office ifaka ukusekelwa kwe-ODF, nokunye ukwesekwa okuhle nokulinganiselwe. Ngokwabelana ngefomethi ngefomethi ye-PDF, esikhundleni salokho, sizoqinisekisa ukuthi labo abavula lelo fayela bangalibona lidizayinwe. Kuyafaneleka ukusho ukuthi i-LibreOffice ifaka phakathi ithuba lokuguqula idokhumenti ibe yi-PDF ngaphandle kwesidingo sokufaka noma yiziphi izandiso noma amaphakheji. Kufanele nje uye Ifayela> Thumela njenge-PDF. Abasebenzisi abafisa ukwenza kanjalo bangalungisa nochungechunge lwezinketho ukwenza ngezifiso ukuthekelisa okushiwo, okuyindlela ngenye yezinto eziphambili kakhulu engizibonile kulolu hlobo lwehhovisi suite.
Uma kwenzeka ukuhlelwa kwefayela elizokwabiwa kudingekile, lapho-ke azikho izixazululo ezinhle, yize kunezincomo ezithile okufanele uzicabangele. Okokuqala nokuphambili ukugcina lawa mafayili ngefomethi ye-MS Office 97/2000 / XP / 2003. Ekuhlangenwe nakho kwami ​​okude ngisebenzisa i-LibreOffice, nangaphambi kwe-OpenOffice, ngingasho ngokuphepha ukuthi amafayela wefomethi ye-DOC (cishe) axhaswa njalo kunamafayela e-DOCX. Kungashiwo okufanayo ngamafayela we-XLS namafayela we-XLSX, njll. Ngakolunye uhlangothi, yize kuhlala kuthanda ukusebenzisa amafomethi wamahhala, i-MS Office ifaka ukusekelwa kwefayela kwe-ODF okuyisisekelo. Ekuphetheni, ngokudabukisayo, ikhambi elingcono kakhulu ukugcina ifayili ngefomethi yakudala ye-MS Office. Lokhu, ngombono wami, impikiswano enkulu kusukela iLibreOffice ifaka ukusekelwa okungcono kwefomethi ye-MS Office ephathelene, kunokuba ifomethi evulekile ye-OOXML. Kepha-ke, lelo iqiniso elidabukisayo.
Ngakolunye uhlangothi, njengoba i-LibreOffice igcina amafayela ngefomethi ye-ODF ngokuzenzakalela, ngaso sonke isikhathi lapho sigcina ifayela elinenye ifomethi sithola uphawu olusixwayisa ngezinkinga zokuhambisana. Uma kwenzeka lokhu kuyacasula futhi ufuna ukugcina njalo ngefomethi ye-MS Office 97/2000 / XP / 2003, kungenzeka ukuthi ushintshe lokhu kuziphatha ngokuya ku Amathuluzi> Izinketho bese Layisha / Gcina> Okuvamile. Lapho kufanele ususe ukumaka ibhokisi Ngazise uma ngingalondolozi ngefomethi ye-ODF futhi ku Hlala ugcine njengo- khetha I-MS Office 97/2000 / XP / 2003, njengoba kubonakala ku-skrini engezansi.
ILibreOffice ifaka ukusekelwa kweMacros, kepha lokhu kugcinwa kusetshenziswa ulimi oluhlukile kune-MS Office. ILibreOffice isebenzisa ulimi olubizwa nge-LO-Basic, ngenkathi i-MS Office isebenzisa inguqulo encishisiwe yeVisual Basic eyenzelwe ngokukhethekile izinhlelo zokusebenza, eyaziwa kakhulu njenge-VBA. Yize zombili izilimi zifana kakhulu, zinokuhluka kwazo futhi azivumelani. Njengokungathi lokhu bekunganele, iLibreOffice ifaka ukusekelwa okuyisisekelo kwe-VBA, futhi i-MS Office ayifaki noma yikuphi ukusekelwa kwe-LO-Basic. Lokhu kusho ukuthi ama-macros abhalwe ku-MS Office awavamile ukusebenza kahle ku-LibreOffice, futhi okuphambene nalokho. Ekugcineni, i- Imibhalo ye-LO-Basic Kuyinto empofu kakhulu, ngisho nangesiNgisi. Labo abanesifiso sokwazi i-LO-Basic, bangabheka lokhu okudala umhlahlandlela wabahleli.
Ubhekene nale nkinga, akukho ukuphunyula, empeleni. Ukuphela kwento esele ukuyeka ukusebenzisa ama-macros noma ukuhumusha ama-macros ngesandla, okungaba umsebenzi olula uma kwenzeka ama-macros alula noma i-odyssey yangempela esimweni sama-macros ayinkimbinkimbi kakhulu.
Ayikwazi ukuhlela amadokhumenti ngokuhlanganyela
Yize eminyakeni eminingana edlule kwamenyezelwa ukuthi lokhu kusebenza ibisakhiwa, futhi nevidiyo ene-prototype esebenzayo yafakwa, ngasizathu simbe leyo nto ayikaze iphumelele. U-Ergo, iLibreOffice okwamanje akanalo ikhono lokuhlela ngokubambisana amadokhumenti.
Okwamanje, inketho engcono kakhulu yabasebenzisi be-GNU / Linux ukusebenzisa i-Google Amadokhumenti, iZoho, noma enye insizakalo yamafu efanayo. Phakathi kwezinye izindlela zamahhala kufanelekile ukugqamisa I-Office kuphela y Ithebula, okuvumela nemibhalo yokusebenza ngokubambisana.
Ukuntuleka kokusebenza noma amaphutha (izimbungulu)
ILibreOffice neMS Office azilethi ukusebenza okufanayo. Lokhu kusho ukuthi ezinye izinto ezingenziwa eLibreOffice azikwazi ukwenziwa ku-MS Office futhi okuphambene nalokho. Ngokunokwenzeka, imisebenzi eminingi ayitholakali ku-LibreOffice kune-MS Office, ikakhulukazi eLibreOffice Impress naseBase, okufana ne-MS Power Point ne-Access.
Ukwazi lokhu kukhawulelwa kusengaphambili kubalulekile lapho uthuthela eLibreOffice. Ukubona uhlu oluphelele lokuqhathanisa lweLibreOffice nokusebenza kwe-MS Office ngiphakamisa ukuthi ngifunde ifayili le- I-Document Foundation wiki. Kumele kuqashelwe ukuthi ezinye zalezi zinkinga azinzima njengoba zibukeka. Iqiniso lokuthi i-LibreOffice Base ayiphelele njengoba i-MS Access ingenandaba kangako uma kubhekwa ukuthi i-Access uqobo ibhekwa njengohlelo oluphelelwe yisikhathi lwedatha, olweqiwa kabanzi ngezinye zesimanje. Mayelana namaphutha okungenzeka ukuthi lolu hlelo lungahle lube nawo, ngoba luyisoftware yamahhala, kuyanconywa bika isinambuzane ukuze umphakathi ukwazi ukuyilungisa.
Kubalulekile ukufunda igama lezinhlelo ezisebenza njengenye yamathuluzi e-MS Office, kanye nezandiso ezahlukahlukene ezisetshenziswa ngokwakhona kuzo zonke zazo.
I-Word (.doc, .docx) Umbhali (.odt)
I-Excel (.xls, .xlsx) I-Calc (.ods)
I-Power Point (.ppt, .pps, .pptx) I-Impress (.odp)
Ukufinyelela (.mdb, .accdb) Isisekelo (.odb)
I-Visio (.vsd, .vsdx) Dweba (.odg)
Iphrothokholi yokuthuthela eLibreOffice
IDocument Foundation, isisekelo sokwakhiwa kweLibreOffice, isilungiselele inqubo yokufuduka kuleli suite lehhovisi elibandakanya uhlu lwezinyathelo okufanele uzithathe lapho uqala inqubo yokufuduka kunoma iyiphi inhlangano. Le dokhumenti inconyelwa ukuthi ifundwe.
Faka Amafonti e-Microsoft
Esinye sezizathu esenza ukuthi eminye imibhalo ingafani ku-Windows naku-GNU / Linux yingoba amafonti asetshenziswa ku-Windows awafakwanga ngokuzenzakalela ku-GNU / Linux. Yize ezinye izindlela zamahhala eza ne-GNU / Linux zifana kakhulu futhi ezinye zazo, noma ziphakeme ngokwezobuchwepheshe, azifani.
Emuva kudala ngo-1996, iMicrosoft yakhipha "ifonti yewebhu ye-TrueType font package." La mafonti ayenelayisense eyekelelayo, ngakho-ke noma ngubani angawafaka. Ngaleso sikhathi iMicrosoft yayifuna ukuthi amafonti ayo abe yizinhlamvu ezijwayelekile emhlabeni jikelele, ngakho-ke ibadedela kulabo abafuna ukuyisebenzisa. Leli phakethe lifaka u-Andale Mono, i-Arial, i-Arial Negro, i-Comic Sans MS, i-Courier New, i-Georgia, i-Impacto, i-Times New Roman, i-Trebuchet, i-Verdana ne-Webdings amafonti. Khumbula ukuthi iTimes New Roman kwakuyifonti ezenzakalelayo yemibhalo yeHhovisi kuze kube ngu-2007.
Ukufakwa ku- Ubuntu kanye nokuphuma kokunye:
sudo apt-get ukufaka ttf-mscorefonts-installer
Amafonti ohlobo olucacile lweMicrosoft nawo angafakwa. Le mithombo yile: UConstantia, uCorbel, uCalibri, uCambria, uCandara noConsolas. I-Calibri yaba yifonti ezenzakalelayo ku-Microsoft Word kusuka enguqulweni 2007 kuya phambili. Ngeshwa, iMicrosoft ayikaze iwakhiphele umphakathi lawa mafonti, njengoba yenzile ngamafonti ohlobo lweqiniso. Kodwa-ke, ufake le mithombo njengengxenye yePowerPoint 2007 Viewer yakhe, etholakala ukulanda mahhala. Ukusizakala ngalesi simo, kungenzeka usebenzise iskripthi esizolanda i-PowerPoint Viewer yeMicrosoft, sikhiphe amafonti ohlobo olucacile, bese uwafaka ohlelweni lwakho lwe-GNU / Linux.
wget -O vistafonts-installer http://paste.desdelinux.net/?dl=5152
Ungakhohlwa ukunikeza ifayili ukukhipha izimvume bese uliqhuba:
I-sudo chmod + x vistafonts-isifaki ./vistafonts-installer
Ukuze usebenzise la mafonti e-LibreOffice vele uye ku- Amathuluzi> Amasethingi bese Umbhali weLibreOffice> Amafonti Ayisisekelo, njengoba kubonakala ku-skrini engezansi.
Uma ubheka ulwazi lwakho njengomsebenzisi we-GNU / Linux, imiphi eminye imibuzo ongayincoma kubasebenzisi abacabanga ukufudukela eLibreOffice?
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Ungenza kanjani ukuthi ushintsho lusuke ku-MS Office luye ku-LibreOffice
Cishe sekuyiminyaka emihlanu ngithuthele eLibreOffice futhi sengithelele abaningi ngoshintsho. Icebo lami akukhona ukuhlukumeza noma ngubani.
Lapho labo abasebenza ngewindows suite bengithumelela amadokhumende, ngibathumela ingxenye yami ngibuyele emuva kuzo zombili izakhiwo, idokhumenti ne-odf. Ngibenza bazi, ngokwesibonelo, ukuthi kulula kangakanani ukusebenza ngemuva kokuba sezandleni zami. Ingxoxo iyazalwa bese ngibatshela nge-suite yami, ngibatshele ukuthi bayifake emishinini yabo enamawindi noma i-mac, ukuyizama, ukuba nezinhlelo zombili nokuqhathanisa ijubane lomsebenzi kokunye nakokunye.
Ngibe namacala abahlanganyeli noma amaklayenti ashiye i-suite futhi ngemuva kwezinyanga ezimbalwa futhi i-OS ephathelene ngoba bathole ukuthi i-Libre ibisebenza kahle, iyashesha, ikhululekile.
O, futhi angikaze ngikukhathaze ngeqhinga lefilosofi lokuthi kungani iningi lethu lisebenzisa isoftware yamahhala. Bafuna ukukhiqiza kahle futhi futhi bakhululeke! Kokuhlangenwe nakho kwami, i-haranguing futhi ngiyithumela ngokumelene namawindows futhi ngivuna i-GNU linux kusuka ezinhlangothini ngaphandle kokukhiqizwa okuthe ngqo okukhiqizayo futhi kungangezi.
Siyabonga ngokwabelana ngolwazi lwakho.
Kusuka kokuhlangenwe nakho kwami, kuhlala kungcono ku-LibreOffice ukugcina amafayela ngefomethi yawo evulekile futhi uwagcine kuphela ngefomethi ye-MS Office lapho ufuna ukuwathumela kumuntu osebenzisa i-office suite.
Uma igcinwa kusukela ekuqaleni ngefomethi evaliwe, idokhumenti ingahluka noma inikeze izinkinga zesitayela / zefomethi isikhathi ngasinye lapho siyivula futhi, ngaphandle kokulungisa amaphutha, ziphinde zivele lapho idokhumenti ivulwa futhi ku-LibreOffice.
Ngihlanganyela ngokugcwele umbono wakho.
Indatshana enhle kakhulu ..
Nginenkinga ngombhalo wamafonti:
bash: ./vistafonts-installer: / bin / sh ^ M: utolika omubi: Ifayela noma umkhombandlela awukho
kepha ifayela likufolda ~ /
Kufanele usethe ukwenza izimvume nge-chmod + x vistafonts-installer.
Uma ngifaka izimvume zokwenza ifayili .. Noma kunjalo, ngizokwenza ngesandla njengo | emir |
Ngiyabonga noma kunjalo!
Ihlelwe kusuka kumawindi, kufanele ususe izinhlamvu ezifihliwe ezisho ukugqashuka kolayini okufakwa amawindi. Kukhona uhlelo oluncane olwenza lokho i-dos2unix. Uwafaka "apt-get install dos2unix" bese usebenzisa lokho uzosusa i- ^ M ebonakala kuwe.
USergio S kusho
Angikwazi ukuthola ifayili engidinga ukuliguqula ukuze ngisebenzise iskripthi Ngubani igama futhi ngikuthola ngakuphi kufolda?
enye indlela yangempela ibizwa nge-wps office, iyinhlangano yehhovisi le-microsoft, iningi labasebenzisi lisetshenziselwa isikhombimsebenzisi sehhovisi le-microsoft ngaleso sizathu kungcono i-wps
I-WPS njengenye indlela yeFreeware yinhle. Njengokunye okunye kwe-Libre, i-LibreOffice noma i-OpenOffice okungcono kakhulu.
Indatshana enhle kakhulu kodwa enhle kakhulu!
| emir | kusho
i-athikili enhle kakhulu egcwele amathiphu athakazelisayo
tube inkinga ngombhalo onjengoJose, angazi ukuthi i-OS yami ayihlobene yini kodwa yaxazululwa
Ngayifunda ngathola izinkomba zokulanda amafayela wefonti bese ngiwafaka ngesandla ngesandla.
Phendula ku- | emir |
Ngesikhathi sokusebenzisana, neCalc isebenza kahle kakhulu, kuze kube manje ayikangiphumeleli.
Iqiniso. Ngikhohliwe ukusho ukuthi ngeCalc unga… angiqondi ukuthi balindeleni ukuze bakwazi lokhu kuMlobi.
Kuleli sonto nje nginqume ukuyeka ukusebenzisa iMicrosoft suite, okuyi-software enhle impela, ukushintshela kuzinguqulo zamahhala, okungenzeka ukuthi bengizisebenzisa iminyaka ekhaya neLinux neWindows. Lokho wukuthi, iThunderbird esikhundleni se-Outlook neLibreOffice esikhundleni seHhovisi.
Izikhathi eziningi ngigcine iHhovisi ukuze lihambisane nemibhalo yabanye ozakwethu namakhasimende, kepha ngibonile ukuthi ukushintshaniswa kwemibhalo nabo kuncane, futhi ukusetshenziswa okukhulu kunakho konke okwami, ngakho-ke angisiboni isizathu sokusebenzisa isoftware ephathelene nami njengakwezinye izimo eziningi inomsuka ongafanelekile.
Mayelana nokuthi ungakhankasa kanjani ... ngomoya ophansi, uma ungicela idokhumenti ngizokunikeza inketho yama-ODF nezinkampani, amafomethi e-PDF noma e-Microsoft aguqulwe yiLibreOffice. Akukona ukwenza lokho, kepha bengilokhu ngizibuza ukuthi kungani ama-SME amaningi esebenzisa isoftware ephathelene nengxenye enkulu kangaka elula, futhi kufanele kunikelwe okuthile.
Iqiniso ngukuthi, ukuvelela kuphakeme kakhulu kuneCalc, ngazama isikhashana ukusebenza kokugcina, kepha lapho ngisebenza ngamarekhodi angaphezu kwe-100.000 iyalenga, igcwele ngokuphelele futhi ama-macro ayo kulula kakhulu ukuwahlela, uzoyibona ku-suite ngaphezu kokubukeka, iCalc idinga ukuthuthukiswa kakhulu ukuyenza ibe yindlela eqinile esikhundleni sehhovisi, umbono wami othobekile wobungcweti ..
Ngicabanga okufanayo. Kunoma ikuphi, kufanele futhi kuthiwe noma kungahle kungabi sezingeni le-MS Excel, iqiniso ukuthi abasebenzisi abangama-90% abasebenzisi ngaphezu kwengxenye encane yalokho okuhlinzekwa uhlelo ... neLibreOffice ingakwazi zenze kahle lezo zinto "eziyisisekelo".
Le nkinga ixazululwa ngokumisa isigaba sememori se-LibreOffice, kufanele ukhulise ukusetshenziswa kwenani elabiwe lenqama.
Umbono ngemuva "kokuhlupheka" ukuqaliswa kwe-ApacheOpenoffice emsebenzini wami.
- Ukuvula idokhumenti kuthatha isikhathi esiphindwe ka-5-6 kunokuyiqala nge-MSOffice. Umphumela walokhu:
Uma uzochitha intambama ubhala umbhalo ofanayo, lokhu ngeke kubonakale kubalulekile kuwe, kepha mina nabasebenza nami sisebenzisa ama-40% wesikhathi ukuvula nokuvala amafayela ukubheka isimo sefayela ngalinye ngaphambi kokuba siqale ukubhala umzimba wombhalo ovuselela lelo fayela.
Imvamisa sinabantu abangaphandle esibachazela ngokuvela kwefayela kusukela ekuqaleni, futhi ezimweni eziningi liqukethe ukubanikeza izindaba ezimbi kakhulu, ngakho-ke esikhundleni sokukwazi ukubanika indaba emanzi nehambisanayo, manje sichitha izikhathi ezinkulu kakhulu ukuthula phakathi kwezindaba ezimbi nezimbi ...
Sinabaphathi abaphazamisa "isikhathi sabo esiyigugu" futhi bazimisele ukushiya ihhovisi labo elinengilazi ngemibono emihle futhi okuwukuphela kwento abasicele yona ukuthi sibanikeze imininingwane abayidingayo ngokushesha ... Ngakho-ke chitha iminithi ye-looooong noma umzuzu nohhafu, noma amabili, noma amathathu… nokuphefumula komphathi wakho ngemuva kwentamo yakhe, akukuhle impela.
Futhi makwaziwe ukuthi angithinti indaba yokuphinda ufunde, ukuthi uma umphathi athi "wonke umuntu manje one-OpenOffice" khona-ke saqina futhi yilokho kuphela, ngikhuluma ngesikhathi sokuphendula, into engeke ixazululwe. ..
Ngokwami ​​ukubona, lokhu kubambezeleka lapho kuvulwa futhi kuvalwa amafayela ngeLibreOffice kubonakala kakhulu ngamafomethi ngefomethi ye-MS Office (.doc, .docx, .xls, .xlsx, njll.). Ngokuphambene, lapho kuvulwa amafayela endabuko e-LibreOffice, ahamba KAKHULU ngokushesha.
Ngakho-ke isincomo sami ukusebenzisa amafayela endabuko e-LibreOffice, uma kungenzeka.
Ngiyabonga ngokwabelana, iqiniso ukuthi, ngicabanga ukuthi kuyisihloko esihle ukunweba ulwazi kumuntu onjengami, umsebenzisi wasekhaya, ngisebenzisa i-GNU / Linux futhi ngijabule ngamakhono amaningi, amathuluzi nezinhlelo zokusebenza ezinakho nalokhu I-Libre Office kimi iyamnandi ngoba angidingi lutho olunye luphelele!. Isibonelo, akusadingeki ukuthi ngifake amanye ama-plugins ukuphrinta amafayela e-pdf, okubalulekile kimi.
Ngikhuthaza noma ngubani ofuna ukuzwa le automation yehhovisi, akukho okulahlekile ngokuzama, kunalokho, kuningi okuzuziweyo.
Ukubingelela okuvela eGuatemala.
Iphuzu elilodwa abakhohlwe ukulisho ukubonakala… I-MSoffice inemibala emi-3 kuphela (emnyama, eluhlaza okwesibhakabhaka nesiliva). Ngenkathi useLibreOffice kunamathuba angenamkhawulo wokukhetha imibala nezizinda ... Futhi lokhu kuyajabulisa kakhulu iso ...
Amathuluzi - Izinketho - Ukwenza kube ngokwakho - Khetha itimu ...
Enye yezinto ezinhle kakhulu kuMthombo Ovulekile ukukwazi ukusebenzisa umkhiqizo osezingeni eliphakeme njengehhovisi elimahhala nelingokomthetho
Ukwehlukaniswa noma inani elikhulu lezinye izindlela - ezinye ezilusizo- kugcina kudida isoftware eqalayo, ukungafani kokubukeka, ukuphatha, ukulawula, izinkinobho, izinqamuleli nokunye, kepha okusebenza kakhulu nokwenza cishe into efanayo.
Amakhulu wokusatshalaliswa kweLinux egatsheni ngalinye, esikhundleni sokwenza uhlelo olukhulu, edelela ibinzana elithi "ubunye ngamandla."
Ukube nje bahlanganisa imiqondo nemizamo, okungenani ngokuhambisana, inqubekela phambili ibingaba nkulu. I-LibreOffice, i-OpenOffice, i-KOffice, i-GnomeOffice, phakathi kwabanye, ngayinye incintisana "ekwenzeni ngokufanayo" ngayinye ngendlela yayo, nakuzinhlelo eziningi. Abanye ngokusekelwa okungcono kwe- $ kunabanye, akusizi ngalutho.
Njengesici esisiza ukufuduka, uma ku-linux kufanele ufake iphakethe le-PPTVIEW (udinga iwayini) ukuze ukwazi ukubona i-ppt ne-pps ngokufanele, ngoba i-LO ne-OO sebenze isibukeli esingasindi. Ukuzama ukubona ama-pp * amaningi kuhamba kancane isikhathi ngasinye ukulayisha yonke i-Libre / Open Impress esindayo esikhundleni sesibukeli esincane nesikhanyayo, esikhona ku-MSO futhi eshesha kakhulu ukusilayisha. Kumafasitela ngisebenzisa iLO kuphela, kepha ngifaka isibukeli se-PowerPoint, ngesizathu esifanayo
Ngine-bug ne-log log ethulwa yi-LO, elinde ukuthunyelwa konjiniyela
UDaniel A. Rodriguez kusho
Ukuqala ngeLibreOffice 4.4, ezinye izindlela ezimbili zamafonti we-Microsoft's Calibri and Cambria zifakiwe. Ukuwafaka nje:
thola ukufaka amafonti-crosextra-carlito amafonti-crosextra-caladea
Uma udinga ukwesekwa kwezilimi zaseNtshonalanga Yurophu, amaTurkey, izimpawu zezibalo nokuxhaswa okuyingxenye yezilimi zaseMpumalanga Yurophu, ungafaka leli phakheji:
thola ukufaka i-ttf-bitstream-vera
Phendula uDaniel A. Rodriguez
Endabeni yokusetshenziswa ngokubambisana kunethuluzi elibizwa ngeSironta, okuthi njengoba ngifundile lingumthombo ovulekile, yize kubonakala kimi ukuthi linenguqulo yamahhala nenguqulo ekhokhelwayo, kepha linikeza ukuhlanganiswa okuhle nama-suites e-Open Source, afana I-OpenOffice neLibreOffice. Ngishiya isixhumanisi uma kwenzeka othile enentshisekelo, kungenxa yanoma iyiphi ipulatifomu (iWindows, iMac OS X neLinux.) Lawa ama-url:
Ngokwami, angikazami, kepha hhe, umuntu onesikhathi angakwenza bese eshiya amava akhe ekhonjisiwe abone ukuthi ngabe kunikeza imiphumela emihle yini.
Phendula ku- the_rookie
Nginezicelo ku-Access 2003 futhi ngithanda ukuzivula ngehhovisi le-WPS. Ungakwenza kanjani lokho? Angazi
Ntambama, ngiliguqula kanjani ifayela le-calc libe ngumbhali ku-linoux
Abakaki 1.1 yini okusha ngemuva kokuchitha isikhathi?